Luukaa Modiriich Badhaasa Balondorii bara 2018 mo'ate - Oromia Broadcasting Network - OBN
Luukaa Modiriich Kiristiyaanoo Roonadoo fi Lionel Meesii dabalatee taphattoonni 30 badhaasa kanaaf kaadhimamanii turan.
KiristiyaanooRoonaldoo fi Lionel Mesin baroota kurnan darbaniin dabaree dabareen badhaasa kana argatan yoo ta’u bara kana FIFAn taphataa cimaa jedhamee kan badhaafame lammiin Kirooshiyaa Luuka Modiriichmilka’ eera.
Luuka Modiriich Kiroshiyaa yeroo jalqabaaf waancaa addunyaa xumuraaf akka geessuuf qoodasaa ba’eera; Riyaal Madiriid yeroo 3 waliitti aansuun waancaa Chaamipiyoonsi Liigii akka argatuuf qoodasaa ba’eera.
Badhaasichi yeroo jalqabaatiif dargaggootaa fi taphattoota dubartoofillee kennameera.Badhaasni kun baroota 61’n darbaniif taphattoota dhiiraa qofaaf kennamaa turuunisaatiin qeeqamaa ture.
Yuunvarsiitin Finfinneen Proofeesar Asmaroom Laggasaaf Dooktara Kabajaa Laate
Proofeesar Asmaroom Laggasaa sirna Gadaa Oromoorratti qorannaa bal’aa gaggeessudhaan kitaabolii akka “Three Approaches to the Study of African Society fi OROMO…
Giddu galli meedikaalaa eebbifamu sireewwan 800 kan qabu yoo ta'u, kutaa Kibba Lixaa biyyaatitti namoota miiliyoona 20 oliif tajaajila ni kenna jedhameera.…
TV - Satellite,Terrestrial Broadcasting Service Radio - AM,FM,SW Broadcasting Service Online - The online service:Radio and TV Live-stream,Facebook,YouTube,Twitter,Instagram…
Dr. Abiyyi Ahmad Toonii Bileeyir waliin ta’uun Baaleetti ooyiruu misoome daawwatan
Dooktar Abiy Toonii Bilaar waliin ta'uuni oyiruu kilaastara oomisha qamadii godina Baalee aanaa Gindhiir ganda Araddoo Qabsoo daawwatan. Daawwannaa kanarratti Ministira…
Maanchistar Yunaayitid Joosee Moriinoo Gaggeesse
Joosee Moriinon turtii waggaa 2 fi walakkaa booda kilabicha gadhiise. Kilabichi ibsa baasen Joosee Moriinon turtii kilabichaa keessatti tajaajila kenna turaniif…
Shaampiyoonii Itiyoophiyaa Jimmaa Abbaa Jifaar
Kilabiin Jimmaa Abbaa Jifaar bara 2009 Waancaa Liigii Olaanaa argatee deeggartoota isaa gammachiiseeture 2010 baruma Liigichatti guddateen gahumsa addaa mul'isee…
Total Visit : 201000
Total Hits : 53931